Ngaba ezi zizona zilo zakha zambi? | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ungandixelela ntoni xa ndikubuza ukuba yintoni ilogo embi? Ndicinga ukuba ilogo embi yeyokusilela ekufezekiseni umsebenzi wayo wokunxibelelana ngendlela efanelekileyo. Ukuthathela ingqalelo into yokuba owona msebenzi uphambili kukunika inkampani ubunini obuthile kunye namaxabiso, xa ubugqwetha bala maxabiso busenzeka kwaye ezinye iziphelo zishiyiwe zivulekile, unokufumana igama lophawu olubi.
Nazi iimeko ezithile ezisebenzayo zayo. Ukuba ucinga ukuba ubonile konke, namhlanje apha uya kukufumanisa oko kwakusekho ububi obabusenziwa.
Ewe, umyili wale logo akenzanga mfanekiso weCawa yamaKatolika nangayiphi na into xa wayiphuhlisa malunga ne1973 kwiKhomishini yoLutsha yeArchdiocesan. Injongo yayo yayikukubonisa umyalezo omnandi (njengoko ujonge kuwo ngokucacileyo), kuba wawuzama ukudala ubudlelwane phakathi kweCawa kunye nomncinci. Kodwa, nzulu? Ngaba yayingekho enye indlela ngaphandle kwengqekembe yomfundisi wethu? Ngokusengqiqweni oku kwaba neziphumo ezibi kakhulu kwaye kwavakaliswa kwihlabathi liphela.
I-classic phakathi kweelogo eziphambili. Olu hlobo lophawu lusebenzisa unobumba omkhulu owongeza izangqa ezibini ezilinike ithoni yokucebisa ngakumbi.
Isicwangciso seMont-Sat yayikukudala i-mascot enobubele kunye novelwano, kodwa kwakhona i-crotch yelogo yethu iyaphuma. Into emangalisa kunazo zonke kukuba iphethe i-eriyali yesiko ... Ngoba?
Abantu ababini abancinci badanisa ngamandla phambi kwamehlo ethu phantsi kokuvuka okushiya uhlobo olungachazekiyo kwaye lufuna kuthi umzamo owongezelelweyo wokufunda amagama amane. Emva kokuchitha malunga nomzuzu ukuzama ukufumanisa umyalezo ongaqondakaliyo safumana umzimba ohamba ze wabasetyhini. Kwakhona?
I-logo emsulwa, eqhelekileyo. Kwaye ayisiyiyo eyokuphambuka, kodwa ngokwayo ayinakuvela ... Ngaphandle kokuba sithathe isigqibo sokuyifunda ngokuthe nkqo. Emva koko umyalezo utshintsha kakhulu.
Iziko le-Hasc likhethe ukumela iilebheli zabo ngombuliso onobuhlobo phakathi kwabantu ababini. Unobuhlobo kakhulu ungathi?
I-logo engaqhelekanga yezizathu ezininzi. Oonobumba bokuqala beZiko lezeMpilo laseTaiwan baxubusha ngendlela engaqondakaliyo nabantu, okukhokelela kubantu abakhubazekileyo okanye abaneziphene. Ileta embindini, ibinokwenzeka njani ukuba kungenjalo, ibonisa umzobo ophuma kwinto ebiya kuba sisinqe sakhe, ngelixa elinye ecaleni kwakhe linomngxunya ... Kwakhona okanye ndim obonakala emdaka?
I-logo encinci, yeskimu kunye neempawu ezintle. Nangona kunjalo isikhokelela ekufundeni okuphazamisayo kwakhona. Ungabathatha abantwana bakho uye kugqirha wabantwana? Ngokuqinisekileyo andenzi njalo.
Iintsingiselo eziphindwe kabini ziyingozi, nabu ubungqina obuqinisekileyo: Ukutshona kwelanga okuhle ngegolide ngequbuliso kunokujika kube ngunyaka. Ngapha koko, ndiqale ndabona unyaka, emva koko ndema ukuze ndiqwalasele kwaye ndibone ukuba yayiyinto yokwakha yokwakha ekuphumeni kwelanga.
Inkuku yenzeka ngokubonakalayo koonobumba D no-B. Igama lophawu, Intaka engcolileyo (intaka emdaka). Ukuqikelela kulungile, kodwa kuyacaca ukuba kukho ukufundwa kwesibini, kuyacaca kwaye kuyamanyala.
Nantsi enye yeziphumo zelogo yeA-Style. Ngenxa yokupapashwa kwayo, iilogo ezininzi zaqala ukubonakala kunye nabo bangayifuniyo into eneentsingiselo eziphindiweyo zokongeza amanqaku ngokungeyomfuneko koonobumba abakhulu.
Le yokubhaka yaba nesibindi kunye nelogo eyinike igama elingalindelekanga. Nangona lishishini losapho eliqhelekileyo, umfanekiso wequmrhu unokusenza sibe nomfanekiso-ngqondweni wezinto ezahlukeneyo.
Ngaba kunyanzelekile ukuba wenze naluphi na uhlobo lokuphawula? Intsingiselo ephindwe kabini ingaphezulu kokucacileyo kwesi siqwenga.
Ukugqagqana kunokulahlekisa. Ngamanye amaxesha kuye kufuneke ukuba konge indawo kwaye kuxinanise zonke iimilo zethu kwindawo ethintelweyo. Kule meko yayisisenzo sobukhalipha kwaye mhlawumbi yenza abathengi abaninzi bacela inkonzo eyongezelelweyo. (?)
Ukutshintshwa kwabantwana ngokukhawuleza kube luTshintsho lweSondo soBuntu, nabu ubungqina. Ukutsala into ethile, akunjalo?
Ngaba ivakala ngathi iqhelekile? Iyafana kakhulu imeko ye-DirtyBird, kuphela kule meko oonobumba d no-b bathweswe isithsaba ngophawu lombuzo (ngokungeyomfuneko ngendlela kwaye ndicinga ukuba ibekwe ngenjongo yokugxininisa ukuba ukufundwa kabini kunye nomxholo wesondo ).
Isishwankathelo ngo-1917 sathi: sifuna ukuba inkampani yethu imelwe kwi-logo yethu ngohlobo lomthengi esimfunayo; Indoda, eneminyaka engama-40-50 ubudala, intle ethanda iisoseji. Ilogo yokoqobo ayifumaneki kolu luhlu. Into emangalisa kakhulu kukuba phantse iminyaka eli-100 akukho mntu uye wafuna ukuyitshintsha.
Enye ingxaki ye-kerning, ekhokelela kwiingxaki zokufunda. Abanini bale venkile ngekhe basindise iintloko kancinci ngokongeza nje iisentimitha ezimbalwa zesithuba phakathi kuka-L no-I.
Aba gqirha bacele ilogo ebonisa ngokucacileyo ukuba banokulungisa nantoni na kwaye emva kohlaziyo oluninzi bagqiba kwelokuba bayigcine le. Ikwabonakala ngathi zilungisa iingxaki kwilungu lobufazi.
Le logo ibonakala ngathi yenziwe ngumyili ngefotoshop ngonyaka ka-2000, mhlawumbi wayengumthandi wesayensi owayengazi lukhulu ngethiyori yombala.
Ukhetho olufanelekileyo lokuchwetheza kodwa ukusetyenziswa gwenxa kwemibala. Le logo inokuba ilogo elungileyo ukuba ibingengowomonakalo eyenzayo emehlweni.
Ngokuqinisekileyo umyili wale logo akazange acinge ukuba umfazi ohamba ze nelangatye phantsi kwakhe angabonakala ngathi uyazikhulula. Ngokuqinisekileyo umthengi akakhange ayiqaphele xa eyivuma kwaye yiyo loo nto ngoku ikuluhlu.
Le kindergarten ibonakala iyingozi ukusuka ekungeneni kwayo. Abantwana ababini abadityaniswe nophahla lwendlu okanye into efana nayo, bayenza ibonakale ngathi iyoyikisa, kodwa inkcubeko yaseMpuma yahluke kakhulu kule yethu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Ngaba ezi zizona zilo zakha zambi?
UJOSE LUIS GIORDANO sitsho
Kuze kube yi-2002, eSpeyin inkqubo yezempilo yelizwe ibizwa ngokuba yiNational Health Institute, yingakho "INSALUD" (NO-Health) yabhalwa kuyo yonke indawo. Unjani? Ke ngoko, ayizizo iiLogos kuphela ezikhethwe kakubi.
Phendula ku JOSE LUIS GIORDANO